Na nangatsiaka aza ny andro : Nangotraka ny Sômaroho manal’azy vita bacc -
AccueilVaovao SamihafaNa nangatsiaka aza ny andro : Nangotraka ny Sômaroho manal’azy vita bacc
Tsy feno hipoka ny Coliseum. Na teo aza ny erika vao maraina, tsy nahasakana ireo mpankafy hiatrika ny fampisehoana izany. Nangotraka ny Sômarôho teto Antananarivo nampisalorana ny anarana hoe « Manal’azy vita bacc haut voltage » ary niarahana tamin’i Wawa, mpamorona ny hetsika sy ireo mpanakanto vahiny maro. Tsy afa-niatrika ny fampisehoana ilay mpanakanto Mahorey, Baco Ali noho ny lozam-pifamoivoizana tamin’ny moto nahazo azy. Ity ny fampisehoana tohin’ny « Sômarôho tour », taorian’ny fitetezam-paritra nataon’i Wawa sy ireto mpanakanto ireto tany Mayotte. Nanokatra ny fampisehoana omaly ilay mpanakanto Toyah sy ireo mozika mampientanentana toy ny « Mandoro Fiangonana »… Nanohy izany avy eo Stéphanie.
Nanohy ny fampisehoana ho an’ireo mpanakanto vahiny kosa i Senguila izay sambany niatrika fampisehoana teto Madagasikara, ary anisan’ireo hirany hain’ny Malagasy tsara ny « Rossignol ». Serge Beynaud avy eo no nanomboka nampitsinjaka tamin’ireo hirany malaza toy ny « Rémambélé », « Mawa Naya », « Akrakabao »… Vao maika nanafana ny fiarahana ny gadona gwetta niaraka tamin-dry Toofan izay namarana ny anjarany tamin’ilay hira malaza « Téré téré ». Niakatra kosa ny maripana tamin’ny fiarafan’ny tolakandro niaraka tamin’i Wawa sy ny « 400 volts » sy ny « Manonga l’escalier ».
Hihazo avy hatrany an’i Nosy be i Wawa izay sady ambasadaoron’ny orinasa Telma. Ity farany izay mpanohana ny hetsika «Sômarôho Tour».
Raha toa ka nisy ny fanahiana ny fiandohan’ny herinandro teo, ny amin’ny mety hisian’ny fatapahan’ny famatsian-drano eto Antananarivo-Renivohitra, dia nivaha ny olana ankehitriny, vokatry ny fandraisana andraikitra ara-potoana nataon’ny fitondram-panjakana. Nihena sy niharitra avokoa ireo ...Tohiny
Fanamarihana ny Tolom-panafahana : “Firaisankina ho fisandratan’i Madagasikara”